RW Soomaaliya oo wax ka raadinaya nabadda K.Sudan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
RW Soomaaliya oo wax ka raadinaya nabadda K.Sudan
10th June 2014 A warsame Af Soomaali 0
Adds Ababa – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federalka Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa xalay gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya.
C/weli Sheekh Axmed ayaa Itoobiya u tegay ka qeybgalka shir aan caadi aheyn oo madaxda IGAD maanta uga furmaya magaalada Addis Ababa, kaasoo looga hadlayo xal u helidda dhibaatooyinka ka taagan dalka Koonfur Sudan oo muddo 6 bilood ah dagaal ka socdo.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa sheegay in reysul wasaaruhu uu kulamo gooni gooni ah la yeelan doono madaxda ka socota IGAD ee ka qeyb galaya shirka.
Wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, Burci Xamza oo qeyb ka ah wafdiga ra’iisul wasaaraha ayaa ka qeyb galaya shirka wasiirrada arrimaha dibadda IGAD.
Wasiirkii hore ee arrimaha debadda Soomaaliya, Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa horay uga qeybgashay dedaalka lagu xallinayo khilaafka keenay colaadda Koonfurta Sudan, iyadoo ka mid ah aheyd wasiiro arrimo debadeed tegay caasimadda dalkaas ee Juba.
Dalaka IGAD ayaa dadaal ugu jira sidii loosoo afjari lahaa dhibaatooyinka kajira dalka Koonfur Sudan ee u dhaxeysa madaxweynaha Koonfur Sudan Salva Kiir iyo madaxweyne ku xigeenkiisii hore Riek Machar.
Muqdisho: Geerida qoys sumoobay oo gaartay 7
Booliska Australia oo toogtay yaxaas liqay dalxiise